सम्झनाका बाजे भन्छन्- मेरी फूलजस्ती नातिनीलाई राक्षसले चुँडिदियो « Janata Samachar
सम्झनाका बाजे भन्छन्- मेरी फूलजस्ती नातिनीलाई राक्षसले चुँडिदियो
आशिष बहादुुर सिंह
बझाङ । मष्टा गाउँपालिका–२ खिकाला कि १२ वर्षीया बालिका सम्झना विश्वकर्माको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भएको छ । जिल्ला अस्पताल बझाङले तयार पारेको पोष्टमार्टम प्रतिवेदनले सम्झनाको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि गरेको हो ।
मन्दिर भित्रै कुटीकुटी हत्या
सम्झनालाई मन्दिर जस्तो पवित्र स्थानमा लगेर कुटीकुटी मारिएको अनुमान गरिएको छ । उनको यौनांगको भित्रबाहिर चोट रहेको, टाउको र पिठ्युलगाएतका शरीररका विभिन्न भागमा चोटपटक लागेको देखिएको छ । बालिकाको शव पाइएको शिव मन्दिर परिषरको अध्ययन गर्दा उनलाई त्यहीँ कुटेरै हत्या गरिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । असोज ७ गते बेलुका ५ बजे गाईबस्तुलाई घाँस हाल्न घरबाट डोको र लाम्लो बोकेर हिँडेकी सम्झना गाईगोठसम्म पुग्नै पाइनन् ।
फूलजस्ती सम्झनालाई राक्षसले चुँडिदियो, सम्झना घरभित्रको सानोतिनो काम मात्र होइन, घाँस काट्ने, बस्तुभाउको स्याहार तथा बारी गोडमेल गर्ने लगायतका काममा पनि निपूर्ण थिइन् । उनी मष्टा आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ६ मा अध्यनरत थिइन् । उनी निकै मिलनसार, अनुशासित, सोझी र कक्षामा पढाउँदा पनि अब्बल भएको पाउने उनका विद्यालयका शिक्षक वीरेन्द्र अधिकारी बताउनुहुन्छ । उहाँले भावुक हुँदै आफैले पढाएको विद्यार्थीको हेर्नै नसक्ने शव देख्दा रुखबाट खसेझैँ भएको अनुभव सुनाउनुभयो ।
बालिकाका हजुरबुबा आफू बिरामी हुँदा पानी दिने जेठी नातिनी गुमाउनुको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दैनन् । केही परिहाले नातिनी छँदैछ भनेर ढुक्क हुने ती बुढा बाजे भन्छन्, ‘मेरी फूलजस्ती नातिनीलाई राक्षसले चुँडिदियो ।’
सम्झनाको ‘हत्या’ ले उनको परिवार मात्र होइन, खिकाला गाउँ नै शोकमा डुबेको छ । घटनाको वास्तविकता तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीका लागि प्रहरीलाई दबाब दिन खिकालावासी सदरमुकाम चैनपुर पुगेका छन् । यस घटनाको सामाजिक सञ्जालमा समेत व्यापक निन्दा भइरहेको छ । विभिन्न अधिकारकर्मी संघसंस्था, राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनले अपराधीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै विज्ञप्ति समेत निकालेका छन् ।
आमाबाबु चार वर्षदेखि भारतको बैंग्लोरमा रहेकाले सम्झना दुई बहिनीसहित बाजेबज्यैसँग बस्दै आइरहेकी थिइन् । नातिनीको हत्यापछि उनका बाजेबज्यै विह्वल अवस्थामै छन् । उनीहरु चैनपुरबाट घर फर्किन सकेका पनि छैनन् । उनीहरु अधिकारकर्मीहरूसँग हत्यारालाई कारबाही गराइदिन अनुरोध गरिरहेका छन् ।
गोठ हिँडेकी सम्झना बाटोमै अपराधीको पासोमा
घटनाको दिन दिउँसो ४ बजेतिर खाजा खाएर सम्झना १५ मिनेट पैदल दूरीमा रहेको गोठमा गाईबस्तुलाई घाँस हाल्न डोको–नाम्लो बोकेर गएकी थिइन् । उनी गोठसम्म पनि पुग्न पाइनन् । बीचबाटोमा स्यालले कुखुरा लेछेझैँ गरेर लुछे मान्छेले नै । ‘दिनभरि बाख्रा चराएर थाकेर आएकी थिइ, गोठमा म जाउँला तँ आराम गर् भन्दा मानिन,’ फूपू लक्ष्मीले आँशु झार्दै भनिन्, ‘केही दिनअघि गाउँकै राजेन्द्र भन्ने एक जनाले सम्झनालाई कानको सुन मागेका थिए, मैले त्यो बेला नै निकालेको भए सायद उसको ज्यान जाने थिएन ।’
‘त्यो दिन बज्जै तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ, म एकैछिनमा पुगेर आइहाल्छु भनेर गएकी हो, सबै साथीहरू आए ऊ आइन ।’ नातिनीलाई रोक्न घरबाट ५ मिनेट जति लाग्ने स्वास्थ्यचौकीसम्म आफूले पछ्याएको स्मरण गर्दै उनले भनिन्, ‘उसले नमानेपछि त्यहाँबाट फर्किएँ । १५ मिनेटजति टाढा पर्ने सिमथला डाँडासम्म सम्झना गएको घरबाट देखेकी थिएँ ।’
उनले बोकेको नाम्लो र डोको मन्दिर नजिकै जङ्गलको खोला तिर फालिएको अवस्थामा भेटिएको उनका बाजे नाता पर्ने कलक कामीले बताए । घटनास्थल पुगेका स्थानीयका अनुसार मन्दिरभित्र हत्यारासँग सम्झनाको निकै घम्साघम्सी परेको जस्तो देखिने र छटपटाउँदा भुइँ खुट्टाले खोस्रिएको समेत त्यहाँको अवस्थाले अनुमान गर्न सकिने बताइन्छ । आफूहरु गरिब भएकै कारण नातिनीका हत्यारा उम्कने हुन् कि भन्ने डर छ परिवारमा । सम्झनाका हजुरबुबा बुढा भएपनि आरनका काम गर्छन् । आरनमा कृषिऔजार बनाउने र मर्मत गरेबापत पाइने अन्न खलोको सहाराले यो परिवारको गुजारा चलिरहेको छ ।
अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका राजेन्द्र को हुन् ?
समातिएका राजेन्द्र १८ वर्षका युवक हुन् । उनी अहिले कक्षा ७ मा पढिरहेका छन् । गाउँमा मात्रै होइन उनीलाई वडाभरका स्थानीयले विभिन्न आरोपमा मुछ्दै आएका छन् । बोहराले गाउँमा धेरैको पसल र घरभित्र पसेर चोरेको स्थानीयको आरोप छ । यसअघि पनि ती व्यक्तिले धेरै घटना घटाएको पाइएको छ । एक जना गाउँकै किशोरीलाई पनि जबरजस्ती गर्न खोजेको खुलासा भएको छ । गाउँका महिलाहरूलाई तर्साउने उनको आचरण रहेको बुझिएको छ ।
खिकालाकै अर्जुन बोहराले घरभित्र छिरेर आफ्नी भाइबुहारीको तिलहरी चोरेको उनलाई आरोप लगाका छन् । उनका अनुसार राजेन्द्रले नै चोरेको खुलेपछि फिर्ता समेत गराइएको थियो । दलित समुदायका महिलाले राजेन्द्रले गाउँका सबै घरमा तोडफोड गरेर चोरी गरेको आरोप लगाएका छन् । यति मात्रै होइन राजेन्द्रले चैतदेखि जेठसम्म मात्रै १६ घरमा चोरी गरेको स्थानीयको आरोप छ । राजेन्द्र गाउँमा कसैसँग नबस्ने र एक्लै बस्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । गाउँका वृद्धवृद्धाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेको थाहा पाएमा राजेन्द्रले घरमा चोरी गर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । यस्तै कतिपय महिलाहरूको कानमा ठूला मुन्द्रा देखेमा ‘तेरो गहना लुट्छु, अनि कान काटेर फ्याँकिदिन्छु’ भन्नेजस्ता धम्की दिने गरेको समेत स्थानीय बताउँछन् ।
बलात्कार प्रयासको घटना पाचँ सय रुपैयाँमा मिलोमतो
एक दलित युवतीमाथि जबरजस्ती गर्न खोजेको आरोप लागेपछि गाउँमै ५ सय रुपैयाँ दिएर मिलोमतो गरेको समेत पाइएको छ । करिब एक महिना अगाडि गाउँकै घट्ट गएकी एक युवतीलाई कानका मुन्द्रा दिने भए देउ नत्र मारेर खोलामा फालिदिन्छु भन्दै राजेन्द्रले जबरजस्ति गर्न खोजेको पीडित किशोरीका दाइभाउजूले बताएका छन् । किशोरीले घटनाका बारे प्रहरीसमक्ष एक बयान पनि दिएकी छन् । प्रहरीका अनुसार, त्यस बेला त्यो घटना स–साना भाइबहिनी हुन् भइहाल्छ भन्दै बोहराका परिवारले पीडित परिवारलाई पाँच सय रुपैयाँ दिएर मिलाइएको थियो ।
राजेन्द्रमाथि यसअघि कारबाही किन भएन ?
गाउँमा राजेन्द्र बोहराले अपराध गर्दा पनि किन कानूनी उपचार भएन भनेर प्रश्न गर्दा गाउँमा सानातिना गल्ती हुन्छन् पछि ठिक भइहाल्छ भनेर गाउँलेले नै माफी दिने गरेको स्थानीय बताउँछन् । सानै छन् भनेर माफी दिँदादिँदै उनीहरुको उमेर बढ्दै जाँदा गल्ती पनि बढ्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ । राजेन्द्रकी आमाले गाउँमा उनले गरेका अन्य गल्ती स्वीकार गरेपनि सम्झनाको विषयमा आफूहरु अनभिज्ञ भएको बताइएन् ।
बालकको शव पनि भेटिएको थियो
करिब ढेड वर्ष अघि हाल सम्झनाको शव भेटिएकै स्थल नजिकै एक बालकको शव पनि भेटिएको थियो । बालकको पनि शिर र घाँटीमा चोटपटक लागेको स्थानीय डबल बुढाले बताए । ती बालकको पनि कानमा लगाएको सुनको मुन्द्रा गायब थियो । यस घटनालाई गाउँलेहरूले गाउँमै कुनै देवताले खाए होला भनेर कुनै पनि ख्याल गरेका थिएनन् । यस घटना दोषीको खोजी नभएको मृत बालकका बुबा शेरबहादुर कामीले बताए । उनले मृत अवस्था भेटिएको र लडेर मरेको हो कि भनेर सिधैँ छोराको शव गाडिएको बताए ।
प्रहरीको अनुसन्धान कहाँसम्म पुग्यो
घटना भएको तीन दिन भइसकेको छ । घटनास्थलमै प्रहरी नायक उपरीक्षक रुपक खड्काका अनुसार एक जनालाई प्रहरी हिरासतमा अनुसन्धानका लागि प्रकाउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय नियत्रणमा लगिएको छ । थप अनुसन्धानका लागि आफू दिनरात खटिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने भएको छ । बुधबार बसेकेाे